कलिलै उमेरमा बिधवा बन्नेहरुका कथा- कति सहज छ पुनर्विवाह ? – Nepal Press
११ औं अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवस
२०७८ असार ९ गते ९:४८
२१ वर्षकी युवतीको मनमा जीवनका कस्ता परिकल्पना होलान् ! जीवनलाई सुन्दर बनाउन उत्कृष्ट पढाइ, राम्रो जागिर, व्यवसाय गर्ने शौख, आफू सुहाउँदो जीवन साथीको परिकल्पना । समग्रमा सुन्दर भविष्यको सपना ।
चन्द्रागिरीकी दीपिका श्रेष्ठ महर्जन पनि तीनै आम युवती मध्येकी एक हुन् । जोसँग २१ वर्षको उमेरमा यस्तै सपना थिए । सुखी भविष्यको परिकल्पना पनि । तर, सुन्दर भविष्य रोज्नेबेला उनको जीवन भने उजाडियो । विवाह भइसकेर पनि उनी एकल (विधवा) भइसकेकी थिइन् ।
सात महिनाको भ्रुणले गर्भमा लात्ती हान्दा खुसी हुनेबेला उनले एकल हुनुको सामाजिक विभेदको लात्ती खेप्दै थिइन् । परिवारले नै उनलाई तँ एक्लो होस् भनिरहेको थियो ।
आज ७ वर्ष पुगेकी छोरी संसार देख्न दीपिकाको गर्भमा चल्मलाउँदै गर्दा उनका श्रीमानले दुर्घटनामा ज्यान गुमाए ।
दीपिकाले एकल जीवनको सात वर्ष गुजारिसकेकी छिन् । २७ वर्षकी उनी श्रीमानको मृत्युसँगै .परिवारको अपहेलना, वेवास्ता सबै एकल हुँदाको छ वर्षमै भोगिसकेको बताउँछिन् । कहिलेकाँही त उनलाई लाग्छ यी सात वर्षमा जीवनभरको दुःखको पहाड भोगिसकें ।
‘हिजोसम्मका भाउजु श्रीमानको मृत्युपछि म्याडममा रुपान्तरण हुन्छन्,’ यो अमिशाले एकल भएपछि भोगेको यथार्थ हो । श्रीमानको मृत्युपछि हामीलाई मान्छेका रुपमा यो समाजले कहिल्यै नहेर्ने रहेछ । आफ्नो काममा घर बाहिर निस्किए आफ्नैले पहिले चरित्रमा प्रश्न उठाउँछन् भन्ने अमिशाको अनुभव आम एकल महिलाको साझा पीडा पनि हो ।
पहिले श्रीमानको जीवन बिछोडिएसँगै रातो रंगदेखि जीवनभर बिछोडिनुपर्ने मानसिक पीडा हुन्थे एकल भएपछि महिलाका । अहिले रंगबियोगले दिएको भन्दा ज्यादा समस्या भोग्न थालेका छन् एकल महिलाले । ‘श्रीमान बितेपछि महिलाको जीवन नै नहुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘सुत्केरी हुँदा अस्पतालको बिल समेत परिवारले तिरिदिएन ।’
परिवारको कुनै सहयोग नपाएपछि ३ महिनाको बच्चा छोडेर काम गर्न थालेकी उनी परिवारमै बसेर छोरी र आफ्नो लागि संघर्ष गरिरहेको बताउँछिन् ।
एकल महिलाको धेरैजसो समस्या एकैखाले हुन्छन् । जस्तो दीपिकाको झैं अमिशा सुनारको पनि छ कथा । उनी पनि २१ वर्षमै एकल बनेकी हुन् । ३२ वर्षकी उनको श्रीमान बितेको ११ वर्ष भइसकेको छ । यो बीचमा कहालीलाग्दो जीवनको यात्रा गरेकी छन् अमिशाले ।
अमिशा र दीपिका दुबैजनालाई विवाहको सोच नआउने पनि होइन । घरका सदस्य आफन्तले केही नभने पनि माइती पक्षले विवाह गर्न सुझाउँछन् पनि । विवाह गर्ने उमेर भर्खर सुरु भएको अवस्थामा एकल बनेका उनीहरु जस्ता महिलालाई लिली थापाले भनेझैं शारीरिक सम्बन्धको आवश्यकता पनि हुन्छ ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार देशभरमा महिलाको कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत एकल महिला छन् । त्यसमा पनि दीपिका, अमिशा जस्ता ३५ वर्षमूनी एकल हुने महिलाको संख्या ६७ प्रतिशत छ ।
माथिको तथ्यांकले पनि भन्छ, भविष्य निर्माण गर्ने क्रममै एकल बनेपछि अधिकांश महिला विवाह नगरी बस्छन् । एकल महिलाको अधिकारको अभियान सुरु गरेकी लीली थापा भन्छिन्, ‘एकल महिला पुर्नविवाहको लागि तयार हुन अझै पनि सामाजिक परिवेशले दिँदैन, मृत्यु भएको श्रीमानसँग जोडिएको उनको भावनामा खेलेर एक्लै बस्न समाजले बाध्य बनाउँछ ।’
हुन त अमिशा र दीपिका दुबैजनालाई विवाहको सोच नआउने पनि होइन । घरका सदस्य आफन्तले केही नभने पनि माइती पक्षले विवाह गर्न सुझाउँछन् पनि । विवाह गर्ने उमेर भर्खर सुरु भएको अवस्थामा एकल बनेका उनीहरु जस्ता महिलालाई लिली थापाले भनेझैं शारीरिक सम्बन्धको आवश्यकता पनि हुन्छ ।
तर, उनीहरु आफ्नो चाहनालाई गौण ठान्छन् । ‘अर्को विवाह त गरौंला तर, मलाई स्वीकार गर्ने केटाले मेरो छोरी स्वीकार्छ ? ’ अमिसा थप्छिन्, ‘अब त म भन्दा अगाडि छोरी छे ।’
अमिशाको मात्रै होइन श्रीमानको मृत्युपछि एकल बनेका सबैजसो एकल महिलाका लागि सन्तान पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसैले उनीहरु आफूलाई सन्तानको भविष्यसँग जोड्छन् ।
२० वर्षमा श्रीमान गुमाएकी ४० वर्षीया उमा रुपाखेतीले एकल जीवनको एकांकीपन हिजोआज महसुस गर्न थालेकी छिन् । उनले उमेर छँदा दुई सन्तानको लागि संघर्ष गरिरहिन् । एक्लो अभिभावक बनेपछि सन्तानभन्दा दोस्रो जीवन नै छैन जस्तो लाग्थ्यो उनलाई । अहिले दुबै छोराको विवाह भयो । उनीहरु काम गर्न बाहिर जान्छन् ।
उमा घरमा एक्लै पर्छिन् । ‘सकुञ्जेल समाज र आफ्नै गाँससँग संघर्ष गर्दैमा बित्यो । जीवनको एक्लोपनले अहिले पो सताउने रहेछ ।’ उमाले अनुभव सुनाइन्, ‘बिरामी हुँदा कहिलेकाँही पानी तताएर दिने, मनको बात गर्ने आफ्नै मान्छे चाहिँ चाहिने रहेछ ।’
एकल महिलाहरुले संगठित हुनैको लागि बीस वर्षबढी संघर्ष गरे । सुरुमा आलोचित हुँदै पनि रातो रंगको अभियान थालेर समाजमा एकललाई बेरंगी हुनुपर्ने सोच पनि परिवर्तन गर्न सफल भइसकेका छन् ।
लगातारको अभियानले सम्बोधनको सम्मानजनक शब्द एकल महिललाई राज्यले परिभाषित गरिदिएको छ । जीवन निर्वाहमा सहजता बनाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि एकल महिलाले पाउँछन् ।
एकल महिलाको पुर्नविवाह भने अझै पनि स्थापित भइसकेको छैन । यसअघि एकल महिलाहरुको समूहले नै राज्यले पुर्नविवाहमा गरेको प्रोत्साहनको बहिस्कार पनि गरेको थियो । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा उनले एकल महिलाको पुर्नविवाहमा प्रोत्साहन स्वरुप सरकारले व्यवस्था गरेको ५० हजार रुपैयाँ रकमको चर्को बिरोध भएको थियो ।
पछिल्लो समय भने मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह नै महिलाको पुर्नविवाहको प्रोत्साहनमा छन् । बागमती प्रदेश अध्यक्ष विष्णुमाया पाण्डे भन्छिन्, ‘हामीलाई विवाहभन्दा सम्पत्तीको अधिकार पहिलो प्राथमिकतामा थियो ।’ अब महिलाको अर्को विवाहमा गर्ने विभेद हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
पछिल्लो समय बनेको मूलुकी देवानी संहिताले एकल महिलाले पुर्नविवाह गर्दा आफ्नो भागको सम्पत्ती छाड्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । लिली थापा थप्छिन्, ‘विवाहपछि पनि एकल महिलाहरुले अरु अप्ठ्यारो नपाउन भनेर हामीले त्यतिबेला बिरोध गरेका थियौं । अहिले त्यो अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ ।’
कानूनी अवरोधका पाटा हटे पनि सामाजिक रुपमा एकल महिलाको पुर्नविवाह सहज छ त ? थापाले एक अन्तवार्ताका क्रममा अनुभव सुनाएकी थिइन्, ‘२९ वर्षमा एकल हुँदा पुर्नविवाहको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको थिएँ । त्यतिबेला मलाई पनि अरु दिदीबहिनीलाई जस्तै आफ्नै र सन्तानको भविष्य महत्वपूर्ण थियो ।’
अहिले भने उनलाई पनि उमा रुपाखेतीको जस्तै अनुभव हुन्छ । तीनै छोराको विवाह भइसक्यो । उनीहरु आआफ्नै जिम्मेवारीमा व्यस्त हुन्छन् । उनले भनिन्, ‘आफ्नो एकांकीपन हटाउन पनि साथी चाहिने रहेछ भन्ने महसुस हिजोआज हुन्छ । आफ्नो कुरा शेयर गर्ने मानिस चाहिँदो रहेछ झैं लाग्छ ।’
प्रकाशित: २०७८ असार ९ गते ९:४८
One thought on “कलिलै उमेरमा बिधवा बन्नेहरुका कथा- कति सहज छ पुनर्विवाह ?”
एकल महिलाको सम्मान हुनुपर्छ,उमेर छँदै एकल भए उनले बिबाह गर्न पाउनु पर्छ।
यो संसार उनीहरुको पनि हो।
कम्फोर्टेबल पार्टीको पहिलो बैठकः प्रतिगमनकारीले जस्तो कमरेड नभन्ने !
सौन्दर्यको आवरणमा लुकेको बाजुरेली व्यथा